Damaca gurracan ee D.P.World wuxuu lid ku yahay Madax banaanidda iyo bed-qabka dhul ahaaneed ee Soomaalidda Dhamaanteed. – Xeernews24
Damaca gurracan ee D.P.World wuxuu lid ku yahay Madax banaanidda iyo bed-qabka dhul ahaaneed ee Soomaalidda Dhamaanteed.
14. März 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Shirkadda Dubai Port World ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan DP World ayaa heshiis suuqa madow ah la gashay Deegaan ka tirsan Dhulka Soomaaliyeed, iyadoo wax ogolaansho ka heysan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kaasi oo markii dambe cirka isku shareeray, waxayna keentay in Dowladda Soomaaliya ay ashtako u gudbisay Ururka Jaamacadda Carabta.
Ururka jaamacadda Carabta ayaa mowqif mideysan ka qaatay heshiiska DP World ee Berbera, taasoo ay Golaha wasiirradda Jaamacadda Ashtako ay u soo gudbisay Dowladda Soomaaliya kasoo saaray baaq ay ku mideysan yihiin oo ah in madaxbanaanida, midnimadda iyo xuduudaha Soomaaliya ay yihiin lama taabtaan oo Dowladda federaalka ay masuul ka tahay.
Kal fadhiga Wasiiradda arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta aya ahaa kii 149-aad, waxana looga hadlay Sagaal ajande oo kamid tahay warqad Dowladda Soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda carabta kuna saabsan heshiiska baadilka ah ee dekadda Barbara si dowladdaha Carabta uga qaatan mowqif mideysan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyay shirka ayaa sheegay in Dowladda Imaaraat-ka ay waajib ku tahay inay ixtiraamto madaxbannaanida iyo midnimadda umadda Soomaaliyeed , isagoo intaa ka dib ugu war bixiyay ajandaha guud ee Shirka iyo mowqifka ay Jaamacaddu iska taagtay arrinta Berbera iyo DP World.
“ Ajandayaasha laga hadlay way badnaayeen ilaa Sagaal ayay ahaayeen, waxa kamid ahaa horumarinta Dalalka Soomaaliya, Suudaan ,Yemen, Liibiya iyo Wadamo kale, waxa annaga gaar inoo ahaa inay jaamacadda Carabta xaqiijiso mowqifkeeda ku aaddan arrinta soomaaliya sida midnimada iyo Qarannimadda umada Soomaaliyeed iyo in aysan jiri karin shirkad ajnabi ah iyo Dalal shisheeye oo arrimaha Soomaaliya soo fara geliya, shirkad aan Dowladda Soomaaliya ka haysan oggolaash marna kama shaqayn karto Soomaaliya” ayuu yidhi wasiir Cawad.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go’aan diidmo ah ka qaadatay heshiiska Seddax geesoodka ahaa ee ay Shirkadda DP-World , Itoobiya iyo Somaliland ay wada galeen, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay baadil meel ka dhac ku ah Qarannimada Soomaaliya, oo uusan sax ahayn heshiis aan soo marin hay’adaha dastuuriga ee Dowladda.
Baarlamaanka Golaha Shacabka ee Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray in heshiiska ay geshay Shirkaddaasi inuu yahay mid baadil, waxayna Mudanayaasha Baarlamaanka Golaha shacabku ku ogolaadeen Mooshinkaasi si aqlabiyad ah, waxaana lagu tilmaamaa mooshinkaasi midkii ugu qiimaha badnaa ee ay soo saaraaan Xildhibaanada, ayna ku muteysteen Ammaan.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa meel mariyay “XEERKA DHOWRIDDA GOBONIMADA IYO MIDNIMADA GEYIGA SOOMAALIYEED” oo qeexaya in dalka laga mamnuucay shirkadda Dubai Port World “DP World” kadib markii ay si bareer ah ugu xad gudubtay siyaasadda, madaxbannaanida midnimada iyo bedqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Kulankaasi ay isugu yimaadeen Golaha shacabka oo uu shir guddoominayay Guddoomiyaha Mudane Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari ayaa si aqlabiyad leh loogu ansixiyay XEERKA DHOWRIDDA GOBONIMADA IYO MIDNIMADA GEYIGA SOOMAALIYEED”.
Xeerkaan qodob ka mid ah waxa uu si rasmi ah dalka uga mamnuucayaa shirkadda Dubai Port World “DP World” kadib markii ay si bareer ah ugu xad gudubtay siyaasadda, madaxbannaanida, midnimada iyo bed-qabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed ayaa soo hadal qaaday in Hay’ado iyo Dowlado qaarkood ay faraha kula jiraan kala dhantaalidda Qaranimada Ummadda Soomaaliya, inkastoo uusan cina magacaabin, ayaa sheegay in aan laga faaideysan xilliga oo ay Soomaalidu ku jirto soo kabasho, balse Dadka Soomaaliyeed waa ka dheragsan yihiin cidda faraha kula jirta arrimahaasi.
Sheekh ka mid ah Shiyuukhda Carabta ayaa ka faallooday Soomaalida, wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay ahaan jirtay dal hodan ah, qofkii dib u eegaa taariikhda waxuu ogaanaayaa in Soomaaliya ay kaalmeyn jirtay dowladaha Khaliijka, waxayna sadaqo siin jirtay dowladaha Khaliijka.
“laakiin maalmuhu way wareegayaan maanta waxaa la joogaa waqtigii shacabka soomaaliyeed loo kaalmeyn lahaa, isla markaana abaaalkooda wanaagsanaa loo gudi lahaay” ayuu yiri Sheekhu, isagoo ka hadalaay Telefishin Caanka ah Al-jasiira.
Sheekhu waxa uu ka digay in aan laga faa’ideysan waqtiga haayo hadda, isagoo si gaar ah u xusayaa imaaraadka carabta ayaa ugu baaqay in ay Soomaaliya u gudaan abaalkii ay u galeeyn, waxa uuna si gaar ah u sheegay in dadka soomaaliyeed ee awood ku lahaayeen Dunida, islmarkaana sumcad iyo sharaf ku leh Caalamka.
Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Magaalooyinka Dalka iyo Dalka Dibaddiisa ayaa soo dhaweeyay go’aankii Dowladda Federaalka Soomaaliya ka qaadatay heshiiska Maamulka Soomaliland la galay shirkadda Imaaraadka ee DP WORLD, iyadoo qaar ka mid ah qeybaha bulshada oo la hadlay Warbaahinta Qaranka Soomaaliya sheegay in ay soo dhaweynayaan go’aanka Golaha shacabka Federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba Dowladu ka qaadatay heshiiska wax kama jiraanka ahaa oo Maamulka Soomaliland la galay shirka dhismaha dekedaha ee Imaaraadka DP WORLD, iyadoo waliba Banaanbaxyo arrintaasi ka dhacayaan Dalka gudahiisa iyo dibaddiisaba, taasoo ay ku muujinayaan shucuurtooda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo mas’uul ka ah ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed ayaa go,aanka dhan ah heshiiska Maamulka Soomaliland la galay shirkadda DP WORLD ka qaadatay, sheegtayna inuu yahay mid waxba kama jiraan ah, maadaamada aysan jirin heshiis nuucaana gali karta oo aan ahayn Dowladda dhexe.
Haddaba waxaa is weydiin ah ma ku sii adkeysan doonaan qolyihii galay heshiiskaasi suuqa madow ah, mise wey ka waantoobi doonaan, maxaase la gudboon Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed iyo Emaaraatka Carabta?, mase bixi doonaa mad-madow soo kala dhexgalay labada Dal ee walaalaha ah?, ugu dambeyntii Damaca gurracan ee D.P.World wuxuu lid ku yahay Madax banaanida iyo bed-qabka dhul ahaaneed ee Soomaaliyeed.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/03/DP-world-port_592_394_84_c1-1132x670-180x135.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-03-14 09:50:392018-03-14 09:52:19Damaca gurracan ee D.P.World wuxuu lid ku yahay Madax banaanidda iyo bed-qabka dhul ahaaneed ee Soomaalidda Dhamaanteed.
Boqortooyadda Sacuudiga oo durba bilaabay dhex dhexaadinta dowladaha Soomaalia... Dowladda Rwandda oo markii ugu horeysay Mamnuucday Dhawaqa Aadaanka Xilliga...